Horudhac: Juventus vs AC Milan… (Turin oo marti gelineysa mid ka mid ah ciyaaraha ugu xiisaha badan Serie A caawa xilli Bianconeri ay…) – Gool FM
(Turin) 19 Sebt 2021. Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa soo dhoweyneysa naadiga AC Milan iyadoo labada naadi ay ku kala jiraan qaab ciyaareedyo kala heer ah isla markaasna is dhaaf ah marka lala barbar dhigo xilli ciyaareedyadii lasoo dhaafay.
Milan ayaa bandhig heer sare ah ku jirta xilli ciyaareedkan iyadoo wada adkaatay dhammaan saddexdii ciyaar ee ay dheeshay horyaalka halka Juve ay weli raadineyso guusheedii ugu horreysay horyaalka fasalkan iyadoo barbarro gashay kulankii koowaad sidoo kalena ay u raaceen labo guuldarro.
Balse toddobaadkii tagay daba-yaaqadiisii ayay labada naadi naatiijooyin ka duwan kuwa ay horyaalka ka heleen kasoo hoyeen tartanka Champions League kaddib guushii Bianconeri ay kasoo gaartay Malmo FF iyo guuldarradii Rossoneri kasoo gaartay Liverpool.
Saacadda ay ciyaarta billaabaneyso: 09:45 Habeennimo xilliga Geeska Afrika.
Garsooraha: Daniele Doveri (Italy)
Juventus ayaa heleysa akhbaar wanaagsan iyadoo usoo laabanayo Federico Chiesa kaasoo kabsaday dhaawac bowdada ah, balse waxaa baddelkiisa dhaawac soo gaaray ku seegaya ciyaarta caawa xiddiga garabka ka ciyaara ee Federico Bernardeschi.
Dhinaca kale, Zlatan Ibrahimovic ayaa wali kasii maqnaana Milan kaddib dhaawac kasoo gaaray feysha waana walaaca ugu weyn ee heysta macallinka Milan ee Stefano Pioli.
AC Milan ayaa heysata rikoorka ugu wanaagsan difaaca Serie A xilli ciyaareedkan iyadoo laga dhaliyay kaliya hal gool illaa iyo haatan.
Milan ayaa guuldarro la’aan ah 25 ka mid ah 27-kii ciyaar ee ugu dambeysay Serie A oo ay bannaanka kusoo ciyaartay.
Rossoneri ayaa shabaqeeda difaacatay toddobo ka mid ah siddeeddii kulan ee ugu dambeysay horyaalka.
Juventus ayaa laga dhaliyay labo gool ama wax ka badan saddexdii kulan ee ay dhammaan tartammada wajahday Milan.
The Old Lady ayaa kaliya hal kulan ka adkaatay Milan shantii is arag ee ugu dambeysay dhammaan tartammada.
Horudhac: Valencia vs Real Madrid... (Dagaalka hoggaanka La Liga oo caawa ka dhici doona Mestalla)